हिमालय खबर | अमेरिकामा चारसयलाई रोजगारी दिने दिपेश भन्छन, नेपालबाट खाली हात ऋण बोकेर आएको हो
अमेरिकामा चारसयलाई रोजगारी दिने दिपेश भन्छन, नेपालबाट खाली हात ऋण बोकेर आएको हो
विजय घिमिरे / विकासराज न्यौपाने ,
प्रकाशित २२ जेष्ठ २०७५, मंगलवार | 2018-06-05 05:32:58
टेक्सस, (अमेरिका) – टेक्ससमा सबैभन्दा वढी ग्याँस स्टेशन वा स्टोर कस्को छ ? भनेर सोधीखोजी गर्यो भने एउटै नाम प्राय दोहोरहन्छ, दिपेश श्रेष्ठ । दिपेशसँगै यो प्रश्न राख्यौं । तपाईका कति स्टोर, ग्याँस स्टेशन छन् ? संख्या भन्न अलि अप्ठ्यारो मान्दै उनले भने,–ठ्याक्कै त नभनौं तर, एक सय भन्दा वढी भने छन् । झण्डै ६० जनासँग त पार्टनरसिप (साझेदारी) गरेको छु ।
काठमाडौवाट आईएस्सीको पढाईसकेपछि दिपेश थप अध्ययनका लागि भारत पुगे । त्यहाँ चार्टड एकाउण्टेण्ट पढ्न गएपनि त्यसमा रुची नलागेपछि पढ्नकै लागि २००२ मा अमेरिका आए । उनी काठमाडौको व्यवसायी परिवारमा जन्मिएका थिए । उनको परिवारको चल्तिको इ्टटा कारखाना थियो । त्यसैले उनले आईएस्सी पढेपनि त्यसपछि व्यवस्थापनसँग सम्वन्धि विषयमा आकर्षित भएका थिए ।
विद्यार्थी भिषामा अमेरिका आएपछि उनको विद्यार्थी जीवन प्राय यहाँ आउने सबैको जस्तै बित्यो । अार्थिक अभाव, सघर्ष, पढाई सजिलो भएन । खर्च जुटाउन उनले पनि ग्याँस स्टेशन लगायत विभिन्न ठाउँमा काम गरे ।
काम खोज्दै उनी जागिर दिन सक्ने नेपालीसम्म पनि पुगे । जब पढाई समाप्त भयो, २००७ मा अरु दुई जनासँग मिलेर साझेदारीमा व्यवसाय थाले । तीन जनाको साझेदारी थियो । त्यसैले त्यो व्यवसाय लामो समय चलेन । त्यहाँको शेयर बेचेर उनी सन २००९ बाट आफैं व्यवसायमा होमिए ।
अहिले ड्यालस र फोर्टवर्थ वरपर दिपेशको लगानी भएका एकसय भन्दा धेरै स्टोर छन् । यी व्यवसाय भएका स्टोर मध्ये ७० प्रतिशत प्रोपर्टी उनीहरुका आफ्नै हुन ।
‘म साझेदारीमा विश्वास गर्छु, त्यसैले ६० जनाभन्दा बढीसँग काम गरिरहेको छु‘ दिपेशले भने,–साझेदारी व्यवसाय चलाउन खासै कठिन छैन म रमाईरहेको छु । कुरा मिल्यो, टिम वर्कमा जान सकियो भने राम्रो हुन्छ ।‘
उनले भन्दैगए–‘म पनि नेपालवाट ऋण बोकेर अमेरिका आएको हो । हात खाली थियो तर, यहाँ मिहिनेत गरेर यो अवस्था सम्म आईपुगेको हुँ । यतिका धेरै साझेदारसँग फे्रन्चचाइज मोडलमा साझेदारी व्यवसाय अघि वढाईरहेको छु ।‘
ग्याँस स्टेशन र स्टोरवाट उनले व्यवसायलाई विस्तारै विविधिकरण पनि गरिरहेका छन् । अहिले म रियल स्टेट, आईटी लगायत अन्य व्यवसायमा पनि हात हालेका छन् ।
भरखरै खुलेको उनको आईटी कम्पनीले यहाँ काम लिई नेपालमा समेत पठाउने गरेको छ । ‘हामी यहाँ आईटीको काम लिन्छौ नेपालमा गराउँछौं । यो शुरुआती चरणमा भएपनि राम्रो गरिरहेको छ, वढ्ने चरणमा छ‘ दिपेशले भने । भरखर्र क्याण्डी उद्योगमा पनि उनले हात हालेका छन् ।
झण्डै १५ बर्ष अघि जागिर खोज्दै टेक्ससमा भौतारिएका दिपेशका व्यवसायमा अहिले चारसय भन्दा बढीले रोजगार पाईरहेका छन् । रोजगारी पाउने विभिन्न देशका छन् तर, नेपालीको संख्या धेरै छ, दिपेशले भने ।
सफलताको कारण के हो ? दिपेश भन्छन् पहिलो मेहिनेत हो । म समान्य व्यक्ति नै हुँ । तर, गोल ओरिण्टेड छु, पढ्दा पनि कम पढेर बढी नम्बर कसरी ल्याउने यो जुक्ति लगाउँथें, अर्को समय व्यवस्थापन पनि हो ।
‘काममा निरन्तरता हुनुपर्यो निरन्तर लागि पर्नु पर्यो म अहिलेपनि सातै दिन काम गर्छु । छुट्टी छैन' दिपेशले भने–‘अरुवाट पनि सधैं नयाँनयाँ कुरा सिकिरहेको हुन्छु ।'
काठमाडौमा व्यापार व्यवसाय भएको परिवारमा जन्मेर अमेरिकामा सफल व्यवसायी दिपेश नेपालको व्यवसायिक वातावरणका बुझ्न नपाएको बताउँछन् । ‘मैले नेपालको व्यवसायिक वातावराणका वारेमा बुझ्ने समय पाएको पाइन । व्यवसायमा जे सिकें यही जानेको हो,‘उनले भने । तर, उनले केही लगानी भने नेपालमा पनि गरेका छन् । आउने दिनमा नेपालमा होटलमा लगानी गर्ने उनको इच्छा छ । तर, यो सुरुआत भने हुन सकेको छैन ।'
यहाँ (अमेरिकामा) रेट अफ रिटर्न अर्थात प्रतिफल (नाफा) धेरै राम्रो छ, पैसा कमाउने यहाँ धेरै अवसर र क्षेत्र छन्, दिपेश भन्छन्–‘नेपालमा अवसर छ भनिन्छ तर, म यहाँ झन वढी अवसर देख्छु । यहाँ पैसा कमाउने धेरै ठाउँ छन् । मलाई यहाँ जहाँ पनि पैसा कमाउन सकिन्छ जस्तो लाग्छ ।'
स्टोर वा ग्याँस स्टेशन व्यवसाय कस्तो हो ? उनी भन्छन्यो- 'कम जोखिम भएको आधारभुत व्यवसाय हो कम फाइदा होला तर, निरन्तर पैसा आउँछ ।'
व्यवसाय भनेको समस्याको समाधान हो, दिपेशले भने हाम्रो आफ्नै संस्थागत सिस्टम छ तर, पनि कहिले काहीँ रात विरात जरुरी पर्दा म आफैं व्यवसायमा पुगेर समस्या समाधन गर्छु । मेरो नाफा भनेको यही हो ।
नेपालीहरु धेरै जनाको ग्याँस स्टेशन स्टोरमा लगानी छ प्रतिस्पर्धा छैन ? उत्तरमा दिपेश भन्छन, छैन । हामी यति ठूलो ठाउंमा छौं कि प्रतिस्पर्धा गर्न पर्ने स्थितिमै पुगेका छैनौं । नेपालको यहाँ एक हजार जति ग्याँस स्टेशन वा स्टोर होलान । १० औं हजार यस्ता व्यवसाय रहेको ठाउंमा यो के ठुलो भयो र प्रतिस्पर्धा हुने । हामी प्रतिस्पर्धा गर्ने तहमा पुगेकैं छैनौं ।
आफ्नो सफलताको जस कसलाई दिनुहुन्छ ? उनी यसको जस परिवार र साथीहरुलाई दिन्छन् । मेहिनेत र म सँग हुनुभएका साथीहरु पनि मेरो सफलताको कारण हो दिपेशले भने –‘परिवारको सहयोग राम्रो छ । जति व्यवसाय गरेपनि भएपनि राति मज्जासँग निदाउन सक्नु पर्यो मेरो विजनेस इथिक्स यही हो । नत्र जीवन रमाइलो नै भएन दिनेश भन्छन,–‘टेन्सन (तनाव)मा बसेर काम हुँदैन गर्ने पनि होइन ।'
विजय घिमिरे / विकासराज न्यौपाने -